Umuthi 'Makmiror' (ikhandlela). imfundo
Umuthi 'Makmiror "(amakhandlela) umyalelo ephawula njengendlela yokuthola kokuba spectrum ezibanzi yesenzo imithi elwa nawo. Libhekisela esuselwe a nitrofuran izidakamizwa. Umkhiqizo ine elwa namagciwane, antifungal kanye nomsebenzi antiprotozoal. ingxenye Active - nifuratel.
High kahle izidakamizwa "Makmiror" yabonisa kuqhathaniswa Papiliobacter futhi Helicobacter pylori (ikakhulukazi bembonisa ukumelana metronidazole), Gram-negative, ama-bacterium Gram-HIV.
Umuthi ubhekwa eyinhloko yoku- bawabulale kwegciwane esiswini, kuhlanganise Shigella futhi Salmonella izifo. Umuthi 'Makmiror "ngempumelelo elwisana ne Trichomonas vaginalis, aqede ukhunta Candida.
Imithi is ngokuphelele excreted ngu izinso, kuyilapho ukubanjwa nethonya eqinile anti-webhaktheriya e ngomgudu womchamo.
Absorption ngemva ezenzeka ngokushesha okwanele. Umuthi ungakwazi ukungena kusivimbeli gazi ebuchosheni futhi yi-placenta, excreted e ngobisi lwebele. Umzimba izidakamizwa esibindini.
Medicine "Makmiror" Kunconywa pathologies okungalapheki izingxenye engenhla ipheshana yesisu elihlobene ne impilo Helicobacter pylori. Ngu izinkomba futhi zihlanganisa amebiasis emathunjini, izilonda e ngomgudu womchamo, okuzovela bedle nezilwanyana ezincane izindlela ebucayi (pyelitis, pyelonephritis, cystitis kanye urethritis ngokukhethekile), giardiasis.
Umuthi 'Makmiror "(amakhandlela) isitatimende uncoma izifo vulvovaginal cuphuluza isikhunta bohlobo lwe-Candida, chlamydia, Trichomonas nezinye amagciwane singangena.
Suppositories asetshenziselwa ekuphathweni lwesitho sangasese sowesifazane.
Umuthi 'Makmiror "(amakhandlela) isitatimende incoma iqondiswa nsuku zonke izinsuku eziyisishiyagalombili. Isikali - omunye suppository ngelanga (ubusuku). Uma kudingekile, emva kokwelashwa kokuya esikhathini kungase kuphinde kushiwo abanye.
Ukuze yenze ukuphumelela izidakamizwa "Makmiror" (amakhandlela) Umhlahlandlela incoma ukuthi ufaka ezijulile sangasese.
suppositories kwesitho sangasese aluboniswa izingane. Ukuze nokwelashwa kweziguli kulesi sigaba usebenzisa ukhilimu lwesitho sangasese sowesifazane.
Lapho ebonisa indlela lo izidakamizwa "Makmiror" Cishe ukuthuthukisa engemihle. Ikakhulukazi, kungase kube ukuhlanza noma isicanucanu, uzizwa ebabayo emlonyeni, isilungulela, uhudo. Mhlawumbe ukuthuthukiswa komzimba nezinto: okuvela ukuqubuka kwesikhumba, ukucasuka noma ukulunywa. Umuthi kungabangela gastralgia, uhudo.
Izimo ukuqokwa izidakamizwa Makmiror "(amakhandlela) kumiyalo isicelo kukhona hypersensitivity.
Uma kunesidingo, sebenzisa suppositories lactating abesifazane kufanele ayeke lactation (ngenxa yokuthi ukuthi isithako singena ubisi). Phakathi nenkathi yokukhulelwa, iwusizo izidakamizwa Kumiswa ngudokotela wakho. Esikhathini aphoyintimenti kufanele bacabangele ikhono izidakamizwa ukungena ngokusebenzisa placenta.
Phakathi ukwelashwa, ochwepheshe ukweluleka bengahlanganyeli ubulili.
Lezi zifundo Akabonisanga nomthelela omubi izidakamizwa "Makmiror" ekhonweni lesiguli ukushayela noma ukwenza ezinye izinto ezingaba yingozi.
Umuthi uyakwazi ukuthuthukisa umsebenzi antifungal we ukulungiselela "nystatin" (uma kusetshenziselwa).
On the ukulungiselela "Makmiror" (amakhandlela) ukubuyekezwa, ngokuvamile, kukhona okuhle ezigulini. I nomuthi libhekene njengendlela oyibamba ephumelela kakhulu futhi fast. Ngaphezu kwalokho, izidakamizwa has ukuphatheka kahle. I yokuntula zomuthi, abaningi baphatha izindleko.
Ngaphambi kokusebenzisa i-suppositories "Makmiror" kufanele kudokotela.
Amafutha "ehlathini Doctor": ukubuyekezwa, imiyalelo
Tablets "Cystone": ukubuyekeza, imfundo, ukufunda
Uchungechunge oluthi "Indlela isitayela esiphenduliwe ngayo": abalingisi, umlando wendalo
Wokucwebezelisa of izibani kusuka ngaphakathi ngezandla zakho: imfundo, amathiphu, ukubuyekezwa
Daikon - kuyini?
10 Amaqiniso fun mayelana show, "The Big Bang Theory"
Porto Carras Sithonia Ihhotela 5 *, Sithonia, Neos Marmaras: izibuyekezo, izithombe
Ingane akazilaleli yini okufanele uyenze? Imithetho ezintathu eziyinhloko ekunakekelweni kwengane